iPhone X ကို အားသွင်းရင် ၂ ဆ ပိုမြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ? – DigitalTimes
iPhone X ကို အားသွင်းရင် ၂ ဆ ပိုမြန်အောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ?
iPhone X ကို လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းဖို့အတွက် ဒေါ်လာ ၅၀ တန် 29-watt Power Adapter နဲ့ ၂၅ ဒေါ်လာတန် USB-C-to-Lightning Cable ကို ထပ်မံ ဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အပို ထပ်ကုန်မယ့် ၇၅ ဒေါ်လာဟာ ထိုက်တန်ရဲ့လားဆိုတာကို အောက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
iPhone X ရဲ့ ဘက်ထရီအားကို ၀ ရာခိုင်နှုန်းအထိ ထားရှိထားပြီး USB-C-to-Lightning Cable နဲ့ 29-watt Power Adapter တို့ဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ နံရံကပ် အားသွင်းပေါက်ကနေ အားသွင်းခြင်းကို စမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်။
iPhone X ကို အားသွင်းပြီး ၁၅ မိနစ်နဲ့ ၃၀ မိနစ်များမှာ ဘက်ထရီ ရာခိုင်နှုန်းကို မှတ်သားလိုက်ပါတယ်။
•	15 minutes: 26 percent
•	30 minutes: 46 percent
Apple က ၃၀ မိနစ်အားသွင်းရင် ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရမယ်လို့ ကြေညာထား ပါတယ်။ ယခု ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းကလည်း ကြေညာထားတဲ့ ရာခိုင်နှုန်း နီးပါး ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် iPhone X ဟာ အားသွင်းရာမှာ iPhone 8 Plus လောက်တော့ မမြန်ပါဘူး။
အောက်မှာတော့ iPhone 8 Plus နဲ့ iPhone7Plus တို့ကို တူညီတဲ့ ကြိုးများနဲ့ Adapter များဖြင့် အားသွင်းထားတဲ့ ရလဒ်များကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အပြည့် အားသွင်းရာမှာ ဘယ် iPhone က အမြန်ဆုံးလဲ ?
အထက်ပါ ဖုန်းသုံးလုံးကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အားသွင်းကြည့်တဲ့ အခါမှာ အောက်ပါ ရလဒ်ကို ရပါတယ်။
iPhone X ရဲ့ သာမာန်နဲ့ လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနည်းများကို နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
iPhone X ကို ဘူးထဲမှာပါတဲ့ သာမာန် 5-watt Power Adapter ၊ USB-A-to-Lightning Cable များနဲ့ အားသွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာ အောက်ပါ ရလဒ်များကို ရပါတယ်။
အဲဒီအတွက် လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းနည်းကို အသုံးပြုရင် ၀ ကနေ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အားဖြည့်ဖို့အတွက် အချိန် ၁ နာရီခွဲ သက်သာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Fast Charger များဝယ်ဖို့ တန်ရဲ့လား ?
iPhone X ကို ၂ ဆ ပိုမို လျှင်မြန်စွာ အားသွင်းဖို့ ၇၅ ဒေါ်လာ ပေးရမှာ တန်ရဲ့လားဆိုတာ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ သင်ဟာ ဖုန်းကို အလွန်အကျွံ အသုံးပြုသူ၊ ဖုန်းအားသွင်းချိန် မပေးနိုင်လောက်အောင် အလုပ်များသူ၊ မကြာခဏ ခရီးသွားသူများအတွက်တော့ Fast Charger ကို ဝယ်ယူထားသင့်ပါတယ်။ သာမာန်လောက်သာ အသုံးပြုသူများအတွက်တော့ ဘူးထဲမှာပါတဲ့ Charger က အဆင်ပြေပါတယ်။